‘श्वेताश्री फाउन्डेशन’को झन्डा विश्वकै अग्लो टाकुरामाFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
‘श्वेताश्री फाउन्डेशन’को झन्डा विश्वकै अग्लो टाकुरामा
फिल्मी फण्डा । श्वेताश्री फाउण्डेशनले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकास्थित विनासकारी भूकम्पमा घरबार गुमाएका माझी समुदायको लागि ५३ वटा घर बनाइदिएको थियो । सामाजिक सेवामा समर्पित संस्था श्वेताश्री फाउन्डेसनले माझी बस्ती निर्माण गरेको थियो । पेम्बा दोर्जे शेर्पाले नायिका श्वेता खड्का र स्वर्गिय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको तस्वीर अंकित टिसर्ट लगाएर विश्वकै अग्लो टाकुरामा श्वेताश्रीको झन्डा फहराएका छन् ।
उनको कारण विश्वकै अग्लो टाकुरा सगरमाथाको चुचुरोमा ‘श्वेताश्री फाउन्डेशन’को झन्डा फहराएको छ । जेठ ८ गते चीन र भारतका १० जना टोलीसँगै सगरमाथा आरोहण गरेका पेम्बा दोर्जेले माझी बस्ती निर्माणका लागि ‘श्वेताश्री फाउन्डेसन’को अभियानबाट प्रभावित भएर सगरमाथामा ‘श्वेताश्री’को झन्डा फहराएका हुन् । नायिका श्वेता खड्काले श्वेताश्रीको झन्डा विश्वकै अग्लो टाकुरामा फहराएकोमा शेर्पाप्रति आभार व्यक्त गरेकी छिन् ।
उनले माझी बस्तीको अभियानबाट प्रभावित भएर आरोही पेम्बा दोर्जे शेर्पाले संस्थाको नामलाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याइदिनुभएछ । साथै मेरो जीवनसाथी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र मेरो तस्वीर अंकित टिसर्ट लगाएर हामीप्रति दर्शाउनुभएको आत्मियता, सद्भाव र प्रेमप्रति हामी आभारी छौ ।’ भनेकी छिन् । त्यस्तै आरोही पेम्बा दोर्जेले नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ उनको मित्र भएको र उनकै नाममा स्थापित संस्थाबाट भइरहेको सामाजिक सेवाको कामलाई अरु हौसला दिन श्वेताश्रीको नाम सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याएको बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ड्रेसमा अलि ख्याल गर्नेकी वर्षा जी ?
फिल्मी फण्डा । नायिका वर्षा राउत हाल फिल्म जात्रै जात्राको प्रमोशनको लागि अष्ट्रेलिया पुगेकी छिन् । अष्ट्रेलियामा दर्शकसँग साक्षातकार गर्न पुगेकी वर्षा हाल ड्रेसको कारण कमेन्ट ट्रोलिङ्गको शिकारमा परेकी छिन् । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा भएको फिल्म जात्रै जात्राको शोमा लगाएकी ड्रेसको कारण उनको ट्रोलिङ्ग भएको हो । उक्त शोमा उनले सेतोमा कालो डट (पोल्का डट) भएको वान पिस लगाएकी छिन् ।
वर्षा विवाह अघिसम्म त्यति खुलेकी थिईनन् तर विवाह पछि निकै खुल्न थालेकी छिन् । पति सन्जोगको साथ पाएपछि उनी खुल्दै गईरहेकी छिन् । वर्षालाई कुन ठाँउमा कतिसम्म खुल्ने भन्ने कुराको ख्याल हुनुपर्ने हो । तर उक्त समयमा वर्षाले यस कुराको ख्याल गरेको पाएको छैन । कलाकार भईसकेपछि ड्रेस जस्तो कुरामा अलि ख्याल गर्नेकी वर्षा जि ? हाल फिल्म जात्रैजात्रा सफलतापूर्वक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रर्दशन भईरहेको छ ।